Egwuregwu Social Media | Martech Zone
Wednesday, February 13, 2008 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Okwu ochie nke mgbasa ozi na-agbasawanye bụ na eyeballs = ego. Ebumnuche na-ezighị ezi nke a na-anabatakarị taa bụ nke ahụ Ọzọ nku anya = Ọzọ ego. Anyị na-ahụ ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ dị ka Digg, Myspace na Facebook ala dị larịị, ọbụnakwa belata na ikere òkè.
Enwere m obi ike na saịtị ndị a niile ga-agbanye azụ ma gwa gị na ha na-eto eto na ọnụ ọgụgụ nke nku anya. Nke ahụ bụ n'ezie ọ bụghị ozi oma. Ọ bụrụ na ndị na-ekere òkè dị larịị ma ọ bụ na-ebe ákwá ma ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-eto, enwere ozi na mgbakọ na mwepụ! Ọkara onye ọrụ na-etinye obere oge… ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ na-agbahapụ ọrụ ahụ kpamkpam.
Ọnwụnwa na-eto eto nnukwu bụ mgbe niile… ọzọ eyeballs nwere ike mee ka ego karịa. Agbanyeghị, nsogbu ogologo oge nke inwe eyeballs nwere ike lie saịtị gị ama ama, ma ọ bụ mee ya nnukwu ebumnuche maka SPAM. Saịtị ndị a kwesiri ịbụ ihe akọ na-enyocha uto nke saịtị ha na mmetụta ndị ọrụ dị ugbu a. A sị na ha mere otu ahụ, ha nwere ike chọpụtala na, iji bulie uru, enwere a nha ziri ezi gaa na saịtị ha ka ha ghara ịgbatị karịa ịnọgide na-achọ uto.
Igwe Obodo = Blight Social Media
Nsogbu a mara ezigbo mma, ọ bụ nsogbu obodo. Mgbe m bi na Phoenix, Arizona otu afọ, agụrụ m ọtụtụ ihe banyere nsogbu ikuku obodo na-eme. Laa azụ na njedebe nke 80s, ala ịta ahịhịa nke Phoenix na-eto eto na ọnụ ọgụgụ na-achọsi ike, na ọ nweghị onye nwere ike ijide isi - obodo. Dika agbata obi juputara na igwe na okporo uzo buru ndi mmadu, ha kwagara na mpaghara ndi ohuru.
Neighborhoodsgbè ndị ọhụrụ a nwere ụlọ akwụkwọ ọhụrụ, ụlọ ọhụrụ, ọtụtụ ala na osisi, na nnukwu ndị agbata obi - ịghara ịkọwa ikuku dị ọcha na ọtụtụ ụlọ ị gafere. Bịaruru ndị agbata obi gị nso… ebe ha anaghị abanye ma na-apụ oge niile… na-aga nnọkọ oriri na ọ socialụ andụ ma na-ekwu okwu na ngere.
Etinyere ya na Social Media, ekwenyere m na anyị na-ahụ otu ihe na-eme. Isi nke Digg na - enwe nsogbu ugbu a - ndị ọrụ nyere aka mepụta ọrụ ahụ ghọrọ ihe ewu ewu na - enweghịzi mmasị ma na - achọ ndị ọzọ. Na MySpace, azịza ya bụ Facebook. Ugbu a Facebook toro dị ka MySpace na otu plateaus na-eme - oge a na ọsọ ọsọ.
Ebee ka mmadu niile na-aga? Echere m na azịza ya bụ mwakpo nke micro-netwọk na-agbapụta. Ndị mmadụ na-ahapụ ogbe ndịda ma na-akwaga n’obodo ahịhịa.
Ozi maka ndị na-ere ahịa
IMHO, nke a bụ nnukwu akụkọ maka Ndị Ahịa. Iji usoro mgbasa ozi gbasapụrụ agbasapụ nke rutere ọtụtụ eyeballs (mana obere ndị na-azụ ahịa) na-aghọ ndị na-ewu ewu. Chọta micro-saịtị nke na-ezute niche ịchọrọ ịbịaru na-aghọwanye ewu ewu. Onwe m, ana m enweta ọtụtụ arịrịọ ndị ọzọ na ego mgbasa ozi maka saịtị niche m na-agba, dịka Ugbo mmiri.
Oge ejiri itinye mkpọsa ahịa gafee saịtị ndị a niile nwere ike ime ihe dị iche na ọnụahịa nke ol ' ogbe na gbawara usoro, ọ bụ ezie. Kụ azụ na dynamite dị mfe, mana ọ na-abụ ụzọ aghụghọ na-emerụ ahụ na ịntanetị. Nke a chọrọ ndị na-ere ahịa ka ha gbanwee usoro ha, na-achọ ka ha rụsie ọrụ ike na ozi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị - yana iwulite ọnụnọ dị n'ịntanetị na aha ọma.
Ọ dịghị onye kwuru na ọ ga-adị mfe!
Tags: blightndị agha mmirielekọta mmadụ medianetwọk mmekọrịta
Feb 15, 2008 na 1:27 PM
Mgbasa mgbasa ozi bụ azụmahịa kachasị atụghị anya ya. Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ dị ka MySpace ma ọ bụ FaceBook lekwasịrị ndị na-eto eto anya na anyị niile maara ụdị ndị a nwere ike ịgbanwe uto ha ngwa ngwa.
Cheta Glowa? Netwọk mmekọrịta mbụ - "dotcom afụ" nke ghọrọ $ 200 nde ruru ma tufuo ihe niile na ụbọchị 1.